FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA MALAMUTE ALIKA MALAMUTE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika Malamute Alika Malamute
Knightmutes 'Kayla Team Yepa (Kayla), sary natolotr'i Kaylatee Kennels
Ny Alaskan Malamute no lehibe indrindra amin'ny alika Arktika. Ity alika matevina sy voaorina tsara ity dia miorina amin'ny rambony mirendrika izay tazomina ao ambadika. Ny loha dia malalaka amin'ny sofina mijoro. Ny maso dia manana habe antonony, volontsôkôlà mainty, ary amandy ny endriny ary apetraka ao anaty karan-doha. Ilay alika dia mitazona sarin'ny amboadia fa manana endrika mirehareha sy mamy. Ny maso maizina no aleony maso manga dia lesoka arakaraka ny fenitra voasoratra. Ny tongotra dia lehibe, amin'ny karazana snowshoe misy pads henjana. Ny palitao matevina sy matevina dia eo anelanelan'ny iray ka hatramin'ny telo santimetatra ny halavany ary tonga amina volondavenona maivana ho amin'ny alokaloky ny mainty, ny sable ary ny volon'ny sable ho mena. Ny fitambarana dia misy volondavenona volondavenona, mainty sy fotsy, amboadia amboadia (akanjo mena misy palitao mainty fotsy) na mena. Ny loko tokana avela dia fotsy. Matetika ny alika dia manana fisongadinana maizina kokoa ary indraindray manana sarontava na kapoty mainty. Ny tongotra sy ny molotra dia saika fotsy foana. Amin'ny faritra sasany, ny alika dia mety ho kely kokoa na lehibe kokoa noho ny fenitra ofisialy.
Ny Alaskan Malamute dia mahatoky sy manan-tsaina indrindra, mamy ary be fitiavana amin'ny tompony. Tsara miaraka amin'ireo ankizy efa lehibe mba hilalaovana milamina aminy. Raha mihaona ny ratra am-bavony, dia alika olon-dehibe mihaja sy malefaka izy io. Tena sariaka izy ireo ary noho izany dia tsy mety amboa mpiambina . Ny alina dia sambatra indrindra mipetraka ivelan'ny trano raha mbola manana fiarahana ampy izy ireo, fa mankafy ihany koa ny fiainana ao an-trano izay misy ny olombelona ' entana 'fiainana. TSY fitarihana mafy orina SY fanazaran-tena ara-tsaina sy ara-batana isan'andro , mety ho lasa ireto alika ireto fanelingelenana manimba , manao toy ny alika kely sy be volo. Amin'ny tranga iray, ny alika tokana dia nanimba ny efitrano fandraisam-bahinin'ny fanaka rehetra izay mitentina $ 15000 ao anatin'ny telo ora monja! Ny malamute dia tia hetsika ivelan'ny trano ary manao tsara amin'ny fankatoavana mihitsy aza amin'ny fankaherezana mafy. Na dia mety ho izany aza sarotra ampiofanina Malamutes ho an'ny fankatoavana ofisialy, tsy dia sarotra loatra ny mampiofana azy ireo hanao mahalala fomba satria tiany ny mampifaly. Mety ho manjakazaka ny lehilahy. Ity karazana ity dia mila ny olombelona manodidina azy hentitra, matoky tena ary tsy miovaova mpitondra entana . Alika sasany sarotra vaky trano . Ity karazany ity dia mpamatsy vola be ary mila sakafo kely noho izay antenainao. Na izany aza, mazàna izy ireo dia mamontsina izay atolotra, izay mety hitarika ho amin'ny tavy sy ny tavy. Mangina ny alina raha ampitahaina amin'ny ankamaroan'ny alika fa aleony midradradradra sy mihady. Ity karazana ity dia tokony harahi-maso manodidina ny biby kely tsy mahazatra, satria manana instinct haza mahery izy ireo. Tsy midika izany fa tsy tsara amin'ny biby kely izy ireo, ny Malamute sasany dia fantatra fa nanangana zanak'alika kely ho azy ireo. Ny lahy sy ny vavy dia mety hiady amin'ny alika hafa, indrindra amin'ny miralenta sy ny karazany ary ny fikirakirana sy ny fiofanana ilaina mba hifehezana izany. Fiaraha-monina mety tsy maintsy atao miaraka amin'ny olona sy ny alika hafa. Ny fampiofanana momba ny fankatoavana dia ampirisihina mafy.
Milanja: Lehilahy 80 - 95 pounds (36 - 43 kg) Vehivavy 70 - 85 pounds (32 - 38 kg)
Ny Alaskan Malamute dia mora mitsonika , dysplasia hip sy chondrodysplasia (dwarfism).
Ny Alaskan Malamutes dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary tokony hanana tokotany malalaka farafaharatsiny. Raha mipetraka amin'ny faritra amoron-tsiraka ianao, dia misy fefy avo tsy maintsy atao, fa aleveno ny fotony, satria mety handavaka ny lalan'izy ireo izy ireo. Ny Alaskan Malamute dia tia mandehandeha amin'izay heveriny ho faritaniny. Ny palitaon'ny Malamutes dia mamela azy ireo hahatohitra hatsiaka be, fa mitandrema kosa mba hitazona ny alika hangatsiaka amin'ny toetrandro mafana. Hamarino tsara fa manana alokaloka sy rano mangatsiaka madio be dia be izy ireo.
Ny malamutes dia mila fanatanjahan-tena mety misy ao anatin'izany mandeha lava isan'andro . Tandremo anefa sao diso tafahoatra amin'ny andro mafana.
Alika kely 4 ka hatramin'ny 10, alika kely 6
Ny Alaskan Malamute dia manana palitao matevina tokony kosehina indroa isan-kerinandro. Mavesatra be ity karazany ity. Ny palitao dia mivoaka amin'ny clumps indroa isan-taona. Ilaina indrindra ny fandroana, satria mora manapoka loto ny palitao. Shampooo maina indraindray. Madio sy tsy misy fofona ity alika ity.
Ny Alaskan Malamute dia alika môtô Nordic nateraky ny amboadia Arctic. Ny anarany dia avy amin'ny Mahlemuts, foko Alaska izay nitaiza sy nikarakara ireo alika ranomandry tsara tarehy ireo. Tamin'ny 2000 ka hatramin'ny 3000 taona lasa izay no nampiasain'ireto Mahlemuit Eskimos any Alaska ireto, ireto alika sarobidy ireto no hany fitaterana entin'izy ireo. Ireto alika mahavariana ireto dia manana tanjaka sy fiaretana amin'ny finiavana hiasa. Tsy fitsangantsanganana kely fotsiny no nitarihin'izy ireo, fa nisintona sakafo sy kojakoja mavesatra ho an'ny vahoaka Arktika ihany koa. Packs of Malamutes dia nandray anjara tamin'ny dian'ny polar maro, izay namboarina manokana izy ireo noho ny hafanam-pony, ny fahatsapana ny fitarihana ary ny fofony faran'izay tsara. Nisehoana endrika tsy hay hadinoina izy ireo tamin'ny tantaran'i Jack London sy Rudyard Kipling. Ny Malamute dia nandeha niaraka tamin'ny dian'ny Admiral Byrd nankany amin'ny Tendrontany atsimo. Ny Alaskan Malamute dia zanak'olo-mpiray tam-po amin'ny arctic karazany Husky Siberia , Samoyed , ary ny Alika Eskimo Amerikanina . Ny sasany amin'ireo talentan'i Alaskan Malamute dia ny filokana, ny sarety, ny fikarohana ary ny famonjena, ny fitaritana lanja ary ny hazakazaka.
'Ity no Shadow my Alaskan Malamute amin'ny 6 volana milanja 80 pounds. Tena haingo izy. Tiany ny milalao ary any ivelany. Toy ny fanariana fako izy ary hihinana na inona na inona raha azony atao. '
Aloka ny Alahady Malamute amin'ny 6 volana milanja 80 pounds.
Aloka ny Alaskan Malamute ho alika alika amin'ny 6 herinandro.
Hijery ohatra misimisy momba ny Alaskan Malamute
Alaskan Malamute Sary 1
Sary Alaskan Malamute 2
Sary Alaskan Malamute 3
Sary Alaskan Malamute 4
Charles mpanjaka cavalier bichon frize Mix
alika kely mainty sy mainty chihuahua
sary an'ny alika kely amerikana bulldogs
omby terrier collie sisintany Mix
alika japoney kesika afangaro amin'ny alika kely amidy